Nhazi na ahia dijitalụ | ECommerce ozi ọma
Nhazi na azụmaahịa dijitalụ
José Ignacio | | eCommerce, Ọzụzụ ECommerce
“Nnyocha e mere na nso nso a egosiwo na 62% nke azụmaahịa dijitalụ enweworị ngwaọrụ ndị nwere ikike dị ka nyocha, nhazi onwe ma ọ bụ omume onye ọrụ maka njikarịcha kachasị nke ahụmịhe ndị ahịa. Naanị site na njikarịcha oge niile ga-abawanye uru nke azụmaahịa ahụ, "ka Christian Hoffmann COO kwuru na onye na-ahụ maka Singular Cover, onye Spanish na-amalite insurtech ọkachamara na azụmaahịa, SMEs na ndị ọrụ onwe ha.
N'okwu a n'ozuzu ya, ekwesiri ighota na nhazi na ahia ndi isi chọpụta ihe ịga nke ọma nke ọrụ ndị a metụtara. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ha na-ewepụta otu ihe dị mkpa maka mmelite na ahịa ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ edemede gị. Site na atụmatụ azụmaahịa ahaziri maka ọdịmma gị.
Yabụ na ị nwere ike ibubata ha na azụmaahịa gị ma ọ bụ ụlọ ahịa dijitalụ, anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ kachasị mma dabere na nhazi nke onwe na azụmaahịa dijitalụ. Ha esighi n'otu ụzọ dị iche iche, mana n'ụzọ ọzọ, ha sitere n'ụzọ dị iche iche esi aghọta azụmahịa n'ịntanetị. Dị ka ị ga-ahụ n'okpuru:
1 Strategy na nhazi azụmahịa
2 Kedu omume ndị enwere ike ịme?
3 Mmetụta nke atụmatụ ahaziri iche na ụlọ ọrụ dijitalụ
Strategy na nhazi azụmahịa
Rụ usoro omume a ga-enyere gị aka site ugbu a gaa n'ihu iji nweta ihe ịga nke ọma na njem ọkachamara gị. Maka ụfọdụ ihe kpatara anyị ga-eji kọwaara gị site ugbu a gawa:
Ọ na - enye gị ngwa ọrụ dị mkpa iji gosi ọdịiche dị n'etiti azụmahịa na ịbịaru asọmpi ahụ n'etiti ngalaba azụmahịa gị.
Atụmatụ dabara adaba maka azụmaahịa gị bụ ụzọ kachasị mma iji nye gị azụmaahịa ka ọhụhụ karịa. Karịsịa, maka ike ya ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'otu azụmahịa.
Ọ bụ usoro dị mkpa iji bulie azụmahịa gị, opekata mpe na usoro mmalite e-commerce.
Nakwa dị mkpa dị ukwuu iji mepụta omume ahaziri iche na nke ahụ kwesịrị ịpụ iche na azụmaahịa ndị ọzọ nọ na otu azụmahịa orbit.
Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè ị nwere n'oge a iji rute ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ n'ihi na ị na-agbaso usoro ọgwụgwọ site na eziokwu ndị a ahaziri maka mkpa gị.
Na-ebu atụmatụ a la carte maka klas nke ụlọ ọrụ a na-ebute na elele na-abawanye nke nta nke nta. Karịsịa, na-enwe mmetụta dị mma na nke mbụ nke usoro a na mpaghara dijitalụ.
Kedu omume ndị enwere ike ịme?
Otu n’ime ajụjụ ndị ị ga-ajụ onwe gị site ugbu a bụ usoro ị ga-esi mejuputa ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmahịa. O doro anya na e nwere ọtụtụ ụdị na ụdị dị iche iche ma site na nke a, anyị ga-ekpughere gị ụfọdụ ihe dị mkpa ị nwere ike iji site ugbu a gaa n'ihu.
Nke mbu gbadoro na eke a nkọwa zuru ezu na akụkụ azụmahịa nke ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị gosipụtara. Ebumnuche nke ịkwalite ọgwụgwọ dabere na njirimara ha na-enye ruo oge ahụ.
Mata ya kasị mma akụkụ nke mere na n'ụzọ dị otú a azụmahịa atụmatụ nwere ike itinye n'ọrụ iji mepụta njikọ njikọ mere ndị a.
Gbalịa chọpụta ma ọ bụrụ na ndị ahịa nwere njikọ na netwọkụ mmekọrịta iji kwado ntinye ya na okirikiri ma obu nzuko nke ulo oru dijitalụ nke gi.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ, eziokwu ahụ e mere maka ịkwa akwa akwa ga-adịkwu irè iji mezuo ebumnuche tupu oge eruo nwere ike ịba uru. Ruo n'ókè na ọ bụ atụmatụ dị irè ma ọ bụrụ na ebubere ya na mkpụmkpụ ma ọ bụ ọbụna ọkara oge.
Mmetụta nke atụmatụ ahaziri iche na ụlọ ọrụ dijitalụ
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata onyinye nke atụmatụ azụmaahịa a na - ewepụta, ọ nweghị ihe dị mma karịa ịgaru nsonaazụ nke mmejuputa ya. Ọ bụghị n'efu, ị ga-enweta nkwubi okwu dị oke egwu nke nwere ike ịba uru dị ukwuu na mmepe nke ọrụ gị site ugbu a gaa n'ihu: youchọrọ ịma ụfọdụ ihe kacha mkpa? Ọ dị mma, kwụọ ntakịrị maka na ọ ga-aba ezigbo uru ịbubata ya na azụmaahịa gị.
Nke mbu, obu uzo ahia na ahia ahia dị nnọọ iche nke ahụ na-arụ ọrụ dịka mkpa gị n'ezie n'ọhịa azụmahịa. Yabụ na ntakịrị nwayọ ebumnuche gị ka emezuru n'ụzọ dị irè ma kwụ ọtọ, n'otu oge ahụ na ọ bụ na njedebe nke ụbọchị bụ otu n'ime ebumnuche kachasị dị n'ihu gị n'oge a.
Site na onyinye abụọ nwere ike ịba ezigbo uru ịkọwapụta ebumnuche kachasị chọọ na mmekọrịta nke azụmaahịa gị ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, na omume ndị a na-ekpughere n'okpuru:
Have ga-enyocha mkpa ọ dị inwe blọọgụ ụlọ ọrụ n'oge a. Ọ nwere ike inyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe.
N'ụzọ ụfọdụ, ọnụnọ nke azụmahịa gị na netwọkụ mmekọrịta dị mkpa iji banye ebe ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị na-aga.
N'ezie, na-enweghị ekele, enweghị obi abụọ ọ bụla na ị ga-enwe ọtụtụ ala nweta iji melite nsonaazụ nke ụlọ ọrụ dijitalụ nke ihe onwunwe anyị. Ebe otu n'ime nyocha ndị kwesịrị nlebara anya bụ nke na-ezo aka na ihe dị iche n'etiti usoro nke njirimara ndị a nwere ike inye gị na mgbalị ga-efu gị tinye ya n'ọrụ iji gboo mkpa a.
Otu ngụkọta nke jikọtara akụkụ abụọ ahụ ga-abụ azịza kachasị mma maka ọdịmma nke ụlọ ọrụ dijitalụ gị ma ị nwere ike nweta ya site ugbu a gaa n'ihu. Na ihe kwesịrị ịbụ otu ihe kachasị mkpa gị n'ọhịa ahịa azụmaahịa ma dabara na oge anyị. N’abughi n’efu, enwere ọtụtụ elele na o kwesiri iwetara gị site n’oge a na ị ga - ahụta ya nwayọ, ọbụghị na mberede dịka ị nwere ike ikwere site na mbido.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nhazi na azụmaahịa dijitalụ
Otu ị ga-esi mee ka ndị ahịa tụkwasị gị obi
Textzụ ahịa Okwu: ahụmahụ ịzụ ahịa ọhụrụ